Raharaha vaky fonja Ikongo Ampangain’ny mpitsara ny depiote Brunel
Nisy vono olona tany Ikongo, nisy olona 10 voarohirohy. Efa saika hanaovan’ny fokonolona fitsaram-bahoaka saingy voasakana, ka nalefa teny amin'ny fitsarana ary nampidirina am-ponja vonjimaika daholo.
Mpanendaka mitondra “moto” Ramatoa mihaja be no mpamatsy vola
Fomba hafa indray no ampiasain’ny mpanendaka amin’iny faritra Andoharanofotsy iny, raha ny fanazavan’ny renim-pianakaviana iray lasibatra teo akaikin’ny ACCES Bank Andoharanofotsy ny talata 12 desambra lasa teo.
Vaky ny fonjan’Ikongo Gadra 120 tafatsoaka
Korontana tsy nifankahitana ny tany Ikongo omaly. Nandritra izany no nahavaky ny fonja any an-toerana, izay misy gadra manodidina ny 120 eo ho eo.
Ady amin’ny asan-dahalo any DIANA sy SAVA Napetraka ny « Kalony »
Tany amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany no niantombohan’ny fidinana ifotony notanterahan’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimaria hanara-maso akaiky ny fampiharana ny paik’ady sy baiko nomen’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena.
Gadra 5 nandositra teny Tsiafahy Iray no voasambotra hatreto
Maro ireo lafin-javatra mahakasika ny fitsarana eto amintsika mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny amin’izay ho tohiny toy ny raharaha Claudine Razaimamonjy, ny endrika tsy fifankahazoana teo amin’ny fitsarana sy ny zandarimariam-pirenena,
Talen-tsekoly voatifitry ny dahalo Tavela ao amin’ny tendany ny bala
Naratra mafy vokatry ny tifitra nataon’ny dahalo azy ny 15 novambra, tokony ho tamin’ny 8 ora alina Randriamanampisoa Olivier, talen’ny EPP Mandrosoarivo, ZAP Kiranomena ao amin’io kaominina io ihany, ary ao anatin’ny DREN Fenoarivobe.
Ady amin’ny tsy fandriampahelamana Nifanao velirano ny vahoakan’i Mampikony sy ny zandary
Tao amin’ny distrikan’i Mampikony ireo iraka manokana nalefan’ny zandarimariam-pirenena hijery ifotony ny fampiharana ireo totomarika sy baiko nomen’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena hametrahana ny fandriampahalemana manerana ny Nosy,